Kana iwe uine hanya nezve kuvanzika kwako unoreva kuti unoda kuisa pasi iPhone yako, mushure mekuita kwakakomba bug muSafari zvinoreva kuti chero webhusaiti inokwanisa kuverenga imwe yako yakavanzika data uye ichangoburwa yekubhurawuza nhoroondo, kunyangwe uchishandisa Yakavanzika Browsing mode.
Nyaya iri pakuti Safari inoshandisa sei IndexedDB, bhurawuza-yakavakirwa dhatabhesi inowanzoshandiswa newebhu maapplication. Mabhurawuza mazhinji anogadzira chiitiko chitsva cheIndexedDB kune yega yega webhusaiti, iyo inogona kuwanikwa chete kubva kune iyo webhusaiti.
Safari zvisinei inogadzira mavhezheni asina chinhu eIndexedDB akagadzirwa nepeji rega rega rewebhu mune imwe neimwe peji rewebhu, zvichireva kuti IndexedDB Safari hairemekedze yakafanana-yakabva mutemo nemazvo.
Kunyangwe iwo makopi emumvuri eIndexedDB akagadzirirwa mamwe mapeji ewebhu asina chinhu, achine zita rakafanana neiyo chaiyo dhatabhesi yakagadzirwa neyekutanga webhu app, iyo inogona kuburitsa ruzivo rwepachivande. Kungovapo kwedhatabhesi kuchaita kuti mamwe mapeji ewebhu azive kuti wakashanyira imwe webhusaiti, semuenzaniso, kuvapo kweNetflix IndexedDB kunogona kuudza Amazon kuti uri mushandisi weNetflix. Zvakatonyanya kuipa, zvakadaro, zita re database rinogona kuburitsa zvitupa zvako. Zita redhatabhesi reGoogle apps (seGmail kana YouTube) rinosanganisira GoogleID yako semuenzaniso, inogona kushandiswa kuwana ruzivo rwako rwunowanikwa pachena, senge pikicha yako.
The bug was yakawanikwa uye yakashumwa neFingerprintJS musi wa28 Mbudzi, asi kusvika parizvino Apple haisati yatora chero danho.
Unogona kuyedza nyaya paFingerprintJS's humbowo hwepfungwa webhusaiti pano, iyo inotarisa kana iwe wakashanyira 30 akasiyana makuru mawebhusaiti munguva pfupi yapfuura.
Pavashandisi veMacOS vanogona uye vanofanirwa kushandisa imwe bhurawuza, asi paIOS ese mabhurawuza anoshandisa iyo Safari web injini, zvichireva kuti vese vashandisi ve iPhone havana kudzikisira kunze kwekungomira kushandisa browser pafoni yavo.
Tarisa FingerprintJS's anotsanangura vhidhiyo pazasi:
Safari App: Yekupedzisira Gwara
40 Clever 404 Mapeji Ekukanganisa Kubva Chaiyo Webhusaiti